Ebɛnadze Ntsi Na Nyankopɔn Wɔ Ahyehyɛdze? | Asɛmpa
1. Ebɛnadze ntsi na Nyankopɔn boaboaa tsetse Israelmba no ano dɛ ɔman?
Nyankopɔn boaboaa tsetse egya Abraham n’asefo ano yɛɛ hɔn ɔman na ɔmaa hɔn mbra ahorow. Ɔfrɛɛ ɔman no “Israel” na wɔbɛyɛɛ ɔman kortsee a wɔsoom Nyankopɔn wɔ nokwar mu na wodzii n’Asɛm do na wɔbɔɔ ho ban. (Ndwom 147:19, 20) Ntsi nna wɔnam Israelmba do behyira asaase do amanaman nyinara.​—Kenkan Genesis 22:18.
Nyankopɔn maa Israelmba no bɛyɛɛ n’adasefo. Ɔman no n’abakɔsɛm ma yehu dɛ, sɛ nyimpa dzi Nyankopɔn ne mbra do a, ohyira hɔn. (Deuteronomy 4:6) Dɛm ntsi, nna nkorɔfo nam Israelmba no do na wobohu nokwar Nyankopɔn no.​—Kenkan Isaiah 43:10, 12.
2. Ebɛnadze ntsi na wɔahyehyɛ nokwar Christianfo dɛ asafo?
Ber bi ekyir no, Jehovah dze Christianfo asafo no sii Israelman no ananmu osiandɛ wɔhweer Nyankopɔn n’enyim adom. (Matthew 21:43; 23:37, 38) Seseiara no, Christianfo ebesi Israelman ananmu na wɔsom dɛ Jehovah n’adasefo.​—Kenkan Ndwuma 15:14, 17.
Jesus hyehyɛɛ n’ekyirdzifo no dɛ kuw mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛkã asɛm no na wɔaayɛ aman nyina n’esuafo. (Matthew 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Seseiara, edwuma yi edur n’ewiei koraa wɔ wiadze ewiei mber yi mu. Iyi nye dza odzi kan wɔ abakɔsɛm mu a Jehovah akã nyimpa ɔpepem pii a wofi aman nyinara mu abɔ mu wɔ nokwar som mu. (Nyikyerɛ 7:9, 10) Wɔahyehyɛ nokwar Christianfo dɛ asafo kor mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛhyehyɛ hɔnho nkuran na wɔaboa hɔnho. Wɔ wiadze nyinara no, wɔwɔ nhyehyɛɛ a ɔma wonya Bible nkyerɛkyerɛ kor noara wɔ hɔn nhyiamu ahorow ase.​—Kenkan Hebrewfo 10:24, 25.
3. Ebɛn kwan do na ndɛ mber yi mu Jehovah Adasefo ahyehyɛdze no hyɛɛ ase?
Wɔ 1870 mfe no mu no, Bible adzesua kuw ketseaba bi hyɛɛ ase dɛ woruhu Bible mu nokwar a nna no do akata ber tsentsenntsen no. Nna wonyim dɛ Jesus hyehyɛɛ Christianfo asafo no mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛkã asɛm no. Dɛm ntsi wɔhyɛɛ ase dɛ wɔbɛkã Ahendzi no ho asɛm wɔ aman nyinara mu. Wɔ afe 1931 mu no, wɔfaa dzin Jehovah Adasefo too hɔn ho do.​—Kenkan Ndwuma 1:8; 2:1, 4; 5:42.
4. Ebɛn kwan do na wɔahyehyɛ Jehovah Adasefo dɛ asafo?
Wɔ mfeha a odzi kan no mu no, Christianfo asafo ahorow a nna ɔwɔ nsaase pii do no gyee akwankyerɛ fii akwankyerɛ kuw a nna wɔgye Jesus to mu dɛ asafo no ne Tsir no nkyɛn. (Ndwuma 16:4, 5) Dɛmara so na ndɛ, Jehovah Adasefo a wɔwɔ wiadze nyinara gye akwankyerɛ fi Akwankyerɛ Kuw a no mufo yɛ asafo mu mpanyimfo a hɔn ho akokwaa no nkyɛn. Akwankyerɛ Kuw no na wɔhwɛ Jehovah Adasefo dwumadzibea ahorow a wɔkyerɛ nsɛm ase, wotsintsim nwoma nye dza ɔkã ho a yɛdze sũa Bible no na wɔkyekyɛ wɔ kasa bɔbor 600 mu no do. Iyi ntsi, Akwankyerɛ Kuw no botum ama asafo ahorow bɔbor 100,000 a wɔwɔ wiadze nyinara no Kyerɛwsɛm mu nkuranhyɛ na akwankyerɛ. Wɔ asafo biara mu no, mbarimba a wɔfata na wɔsom dɛ mpanyimfo na ahwɛfo. Dɛm mbarimba yi fi ɔdɔ mu hwɛ Nyankopɔn no nguankuw no.​—Kenkan 1 Peter 5:2, 3.
Wɔahyehyɛ Jehovah Adasefo dɛ asafo mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛkã asɛmpa no na wɔaayɛ nkorɔfo esuafo. Yɛkã asɛm no wɔ efiefi mu dɛ mbrɛ asomafo no yɛe no. (Ndwuma 20:20) Yɛnye nyimpa a hɔn enyi gye nokwar no ho no yɛ Bible adzesua. Naaso Jehovah Adasefo nnyɛ ahyehyɛdze bi kɛkɛ. Yɛyɛ ebusua a yɛwɔ Egya a ɔwɔ ɔdɔ. Yɛyɛ enuanom mbanyimfo na mbasiafo a yɛdwen hɛn mu biara ho. (2 Thessalonicafo 1:3) Osiandɛ wɔahyehyɛ Jehovah no nkorɔfo dɛ asafo mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛyɛ dza ɔsɔ n’enyi ntsi no, wɔyɛ ebusua a wɔwɔ enyigye sen biara wɔ asaase do.​—Kenkan Ndwom 33:12; Ndwuma 20:35.
Takyer Jehovah Ho
Yebesi dɛn adɔ Nyankopɔn na yɛaakyerɛ enyisɔ wɔ dza ɔayɛ ama hɛn no ho?
Fa mona Fa mona Ebɛnadze Ntsi Na Nyankopɔn Wɔ Ahyehyɛdze?